१८:१८, ८ डिसेम्बर २०१४ जस्तै गरी पुनरावलोकन
१० bytes added , ६ वर्ष अघि
१०:१८, ४ जनवरी २०१४ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (Bot: Changing commonscat link from क्यालिफोर्निया to California)
१८:१८, ८ डिसेम्बर २०१४ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
खेती, चलचित्र बनाउनु, र उच्च प्रबिधि, अर्थात् सफ्टवेयर र वेब साईट: राज्य यि तीनको कारोबारमा एक नेता हो. एयरोस्पेस वहाँ एक ठूलो उद्योग हुनेगर्थ्यो, तर पछिल्लो 20२० वर्षमा आकार सानो हुदैछ।
वहाँ क्यालिफोर्नियामा धेरै भूकम्प गयो। उनि हुन्छन् जब दुई पृथ्वी crusts भूमिगत बदलाव। क्यालिफोर्नियाले भूकम्पको लागि र प्रयजसो संकटकालिन अबस्थाको स्थितिको मामलामा अतिरिक्त भोजन, पानी, flashlights, र प्राथमिक उकचारको बन्दोबस्त तयार भै रहनु पर्छ।
पहिले यूरोपीय जसले तटको केही भागको भ्रमण गरे, Rodriguez Cabrillo जुआन, १५४२मा पोर्चुगलबाट आए, क्रिस्टोफर कोलंबसले पहिले भ्रमण गरेको पचास वर्ष पछी । पहिले यूरोपीय जसले पुरा तट देख्यो उनी सर फ्रान्सिस ड्रेक थिए, १५७९ मा, र उनले निर्णय गरे कि ब्रिटिश यो स्वामित्व छ। तर १७००को पछिको शुरु देखी, रोमन क्याथोलिक चर्च ("मिशनरियों")को स्पेनिश धार्मिक नेताहरूले स्पेनिश राजा र रानीबाट उत्तरी बाजा क्यालिफोर्नियाको क्षेत्रमा ठूलो उपहार पाए। यो धार्मिक मानिसले साना शहर र गांउ बसाए, प्रसिद्ध क्यालिफोर्निया मिशन। जब मेक्सिको अब स्पेनको द्वारा नियंत्रित भएको थिएन, मैक्सिकन सरकारले गांउहरू लियो, र उनीहरूले चाडै नै खालि गरायो।
[[चित्र:Lightmatter sanfrancisco.jpg|thumb|[[San Francisco]], California|300px३००px]]
१८४६ मा, मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध शुरू भएको थियो, क्यालिफोर्नियामा केही अमेरिकीहरूले एक क्यालिफोर्निया गणराज्य बनाउने आशा राखे। यि मानिसहरूले "भालू झण्डा" फहराए जसमा एउटा तारा सहितको एक स्वर्ण भालू थियो। यस गणराज्य अचानक समाप्त भयो, तथापि, जब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को नौसेनाको कमोडोर जन डी. Sloat सैन फ्रान्सिस्को खाड़ी तर्फ लागे। उनले भने कि क्यालिफोर्निया अब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को हिस्सा हो। मैक्सिको संगको युद्ध समाप्त भएपछी, क्यालिफोर्निया दुई देशहरूको बीच विभाजित गरिएको थियो। मेक्सिकन भाग Baja California (उत्तर) र Baja California (दक्षिण)को मैक्सिकन राज्यों बन गया. (स्पेनिशमा "बाजा"को अर्थ "तल्लो" हुन्छ।) [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को लागी दिईएको भागको पश्चिमी भाग क्यालिफोर्निया आज राज्य बन्यो।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/432576" बाट अनुप्रेषित